Wararka Maanta: Axad, Jun 6 , 2021-Somaliland : Xisbiga talada haya ee Kulmiye oo ka hadlay isbahaysiga xisbiyada mucaaradka
Guddoomiyaha ayaa sheegay in sidi wanagsanayd ee doorashadu u dhacday ay kala wayntahay xisbiyada is bahaystay.
“Isbahaysiga ay labada xisbi ku dhawaaqeen xaq bay u leeyihiin, waa xisbiyo mucaarad ah, dimuquraadi baynu ku jirnaa” ayuu yidhi.
“Hadaanu nahay xisbiga Kulmiye waxa soo dhan waxa nagala wayn guusha ay Somaliland gaadhay”.
“Hadaanu nahay xisbiga Kulmiye iyo xukuumadiisa waxa nagala weyn sidii quruxda badnayd ee ay doorashadii u dhacday” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Xisbiyada mucaaradka Somaliland ee Waddani iyo UCID, ayaa maanta ku dhawaaqay isbahaysi ay kula wareegi doonaan aqlabiyada golayaasha wakiilada iyo deegaanka.